Undestanding IslamးIslam ကိုနားလည်ခြင်းအပိုင်း(လေး) – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on March 19, 2009April 8, 2009 by kyawkyawoo	Posted in UncategorizedTagged ကျမ်းမြတ်ကုရအန, ခတီဂျာသခင်မ, ဆင်းရဲသား, တမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلام, မဒီနာမြို့သား, သစ္စာရှင်မဟာလူသား, အိုင်ရှာသခင်မ, ကျော်ကျော်ဦး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, chinese muslims, Dr Zakir Naik, Invitation to all Muslim Minorities, Is the Quran Allah's word?, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Navedz's Words of Love, Orientalists, religion, Undestanding Islam, Words of Loves	The following post is adapted from the original public talk title ” Is the Quran Allah’s Word?” by Dr Zakir Naik.
For the benefit of the Non Burmese readers and those who want to know more, I have included the original extract which I have copied from Words of Loves blog in this post.
keep reading at Navedz’s Words of Love
The following is the part4of the series of adaption of Dr Zakir Naik ‘s work into Burmese language.
by Kyaw Kyaw Oo
Orientalists တွေကကျမ်းမြတ်ကုရအန် တမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلام ၏နှုတ်မှဆင့်ပြန်ခဲ့သည်ကိုသုတေသနပြုချက်များမှလုံးဝမငြင်းနိုင်တဲ့အခါ
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုတမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلامိ ကသိစိတ်နဲ့ဖြစ်စေမသိစိတ်နဲ့ဖြစ်စေ
တမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلامိ် ဟာမည်သည့်အခါကမှကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုမိမိစိတ်သဘော
ဒါကြောင့်တမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلامိ်ကို Al- Ameen သစ္စာရှင် ဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့လူအများကသိနေကြတာတမန်တော်ဘဝမရောက်မီကတည်းကပါ။
တမန်တော်ရဲ့ ရန်သူများသည်ပင်လျှင် သူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ရတနာများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံထားတာ သမိုင်းအရ အတိအကျပါ။
Orientalists တွေရဲ့စွပ်စွဲမှူ တွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်
အချို့ကတမန်တော်عليه السلامိသည်ရုပ်ပစ္စည်းနဲ့အာဏာအတွက် တမန်တော်အဖြစ်ကြေညာနိုင်ရန်ဒီလိုကုရအန်ကိုမိမိနှုတ်မှပြောပြီး ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်လို့ဆိုတယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ်။
ဟာဒီသ(Hadith) အာနာဝါဝီ အမှတ်လေးရာကိုးဆဲ့နှစ်ကဒီလိုဆိုပါတယ်
မိမိတို့ ( တမန်တော်နှင့်အိုင်ရှာသခင်မ)သည် မီးထွန်းရန်ဆီမရှိသောကြောင့် တစ်လ၊နှစ်လအမှောင်ထဲတွင်နေရသည်။မိမိတို့စားရသည်မှာ ရေ၊စွန်ပလွန်သီးနှင့် တခါတရံမဒီနာမြို့သားများပေးသည့်ဆိတ်နို့ ဖြင့်အသက်ဆက်ရသည်။
မိတ်ဆွေ… တမန်တော်မြတ်عليه السلامိထံမှဗျာဒိတ်တော်ကျကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကို
ကားအလာအရှင်မြတ်ထံမှ(ထုတ်ပြန်ပို့ချသောဒေသနာတော်ကျမ်းဂမ်)တည်း ဟူ၍(လိမ်လည်)ပြောဆိုကြသောသာသနာ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပ်တို့သည် ပျက်စီးကြရကုန်လတံ့။
အကယ်၍တမန်တော် عليه السلام သည်ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့လျှင်သမိုင်းရဲ့
ဘက်ပေါင်းစုံကသုတေသနပြုခဲ့ကြတာပါ။ဘယ်သုတေသီကမှတမန်တော် عليه السلامသည်ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားတယ်လို့အထောက်အထားမတွေ့ခဲ့ပါ။
အထက်ပါအာရတ်(Verse)ရဲ့ဆိုလိုချက်က အကယ်၍တမန်တော် عليه السلامသည်ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုမိမိ
ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့ လျှင်မိမိကိုယ်ကိုပျက်စီးမယ်လို့ပြန်ပြောနေတာဖြစ်၍ လုံးဝအကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်မှူမရှိပါ။
ဒါကြောင့်ကျန်းမြတ်ကုရအန်သည်တမန်တော်မိုဟာမက်عليه السلامိ်၏
Orientalists အရှေ့တိုင်းပညာရှင်များကတမန်တော်မြတ် عليه السلامသည်ကျမ်းမြတ်
တမန်တော်عليه السلامသည်လောကီစည်းစိမ်၊အာဏာ မက်သောခေါင်းဆောင်
ကျွန်တော်တို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တမန်တော်عليه السلام ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ရအောင်
တမန်တော်မြတ်عليه السلام သည် မိမိသောက်ရန်ဆိတ်နို့ကို မိမိလက်ဖြင့်ညှစ်ယူသူဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်عليه السلامသည်မာနထောင်လွှားခြင်းမရှိပဲ လူတိုင်း၏ စကားများကို (ကောင်းရာကောင်းကြောင်းအတွက်)နားထောင်လေ့ရှိသည်။
တခါတွင်အာရပ်ဘာသာမဲ့တို့၏ကိုယ်စားလှယ် အွတ်ဒဘာ ဆိုသူကတမန်တော်عليه السلام်ကို
မိမိတို့ပေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။အာရေဗျ၏ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ရန် နှင့်သင်လိုချင်ရာအားလုံးမိမိတို့ပေးမည်။ သင့်အနေနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်တဆူဝါဒကိုဗျာဒိတ်တော်မှတဆင့်ပြောကြားခြင်းရပ်ဆိုင်းရန်သာလို
တမန်တော်ကဦးလေးတော်အဘူတာလစ်ကို “ဦးရီးတော် သူတို့ကနေနှင့်လကို(တမန်တော်)၏လက်နှစ်ဖက်တွင်ထဲ့ပေးသည့်တိုင် Allah ၏တာဝန်ပေးမှူကိုသေသည်အထိစွန့်လွတ်မည်မဟုတ်ပါ” ဟုပြောခဲ့သည်။
အောင်မြင်မှူတစ်ခုရတိုင်း Allah အရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လို့သာကြွေးကျော်
ပြီး ပိုမိုနှိမ့်ချရိုးကျိုးတဲ့ အသွင်ဟာထိုစဉ်ကသာမန်အာရပ်ဘုရင်များနဲ့
3 thoughts on “Undestanding IslamးIslam ကိုနားလည်ခြင်းအပိုင်း(လေး)”	March 20, 2009 at 10:34 am	Doa @ tootoolayy says:
လာရောက်လေ့လာသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်ဦး ဘလောဂ့်ကို ဒါ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းပါ။ ပိုစ့်တွေကို နိုင်သလောက်တော့ ဖတ်သွားပါတယ်။ နောက်လာလည် လေ့လာပါဦးမယ်။
March 20, 2009 at 4:26 pm	kyawkyawoo says:
Thank you for your comment.Insha Allah we will keep in touch.
February 21, 2011 at 2:35 pm	khajar says:
ကျွန်တော်ကို quran ဘာသာပြန်ကို hathis တော် ၆ ကြမ်း ကို e-mail ပို့ ပေးပါ
Prophet’s Birthday in Yangon, MyanmarHistory of Holy Quran Translation to Burmese (Myanmar)